Imithombo yolwazi - IEAGE
IEAGE Institute futhi Academia IEAGE umnikelo business zokuxhumana nolwazi esiqondiswe entrepreneur, kuhloswe nokwandisa imizamo yabo yokuletha impumelelo ibhizinisi lakho kanye nokuphila okungcono. Nokho, akukho nhlangano kungaba amboze yonke ulwazi noma kwenze kube atholakale emphakathini. Ngakho-ke, sizoveza ngaphezulu Ulwazi Imithombo, le hlu ashukumisayo okuzoxoxwa olusha njalo, lokho kuyisibopho sethu futhi, Godu, kuyinto ilungelo zonke izakhamuzi, kuphi emhlabeni, ukuze ukufinyelela olwazini.
University of the People (University of the People) non-profit wezwe wokuqala, yesikole-free, egunyaziwe enyuvesi online anikezelwe ekuvuleni amasango imfundo ephakeme bonke abantu ayenele ngenye.
TED iyinhlangano engenzi inzuzo azinikele imibono ekusakazeni, ngokuvamile ngesimo short, izingxoxo enamandla (18 imizuzu noma ngaphansi). TED kwaqala ngo 1984 njengoba ingqungquthela lapho Technology, Ezokuzijabulisa and Design weni, futhi namuhla ihlanganisa cishe zonke izihloko - nesayensi osomabhizinisi ukuze nezindaba global - Zingaphezu kuka 100 izilimi.
ukuvula Ulwazi : MIT OpenCourseWare (OCW) Le ncwajana web-based ephelele cishe zakho konke MIT course okuqukethwe. OCW ivulekile futhi atholakale emhlabeni futhi unomphela MIT umsebenzi. (zokwakha ezivela 2150 izifundo kanye ine 125 izivakashi ezibalelwa ezigidini)
Mission Open University avuleke abantu, izindawo, izindlela kanye nemibono. We ukugqugquzela ithuba ezemfundo kanye nobulungiswa benhlalo yomphakathi n ngokunikeza eliphezulu yaseyunivesithi kubo bonke abafisa ukuba uqaphele izifiso zabo futhi afeze potential.Through ucwaningo lwabo academic, innovation pedagogic kanye nozakwethu ngokubambisana sifuna ukuba abe umholi wezwe design, okuqukethwe kanye kwezidingo wasekela yokufunda evulekile.
Open Education Consortium umphakathi emhlabeni wonke amakhulu izikhungo zemfundo ephakeme kanye nezinhlangano ezihambisanayo uzibophezele imfundo ovulekile kanye nomthelela walo on imfundo global. Thina nombono wezwe lapho wonke umuntu, yonke indawo likwazi ukufinyelela imfundo badinga ukwakha ikusasa yabo. Vula imfundo encompasses izinsiza, amathuluzi kanye nemikhuba ukuthi baqashe uhlaka ukwabelana evulekile ukwenza ngcono ukufinyelela kwezemfundo kanye nemphumelelo emhlabeni wonke.
Mooca Massive Vula Izifundo Online
I Coursera is a platform yokufunda esakha ubudlelwano amanyuvesi top kanye nezikhungo zemfundo emhlabeni wonke ukuba anikele inthanethi futhi free bonke izifundo. Sebenza ukuze esikhathini esizayo, wonke umuntu enelise ukuthenga imfundo esezingeni lomhlaba wonke, I Coursera ikhuthaza ngcono izimpilo zabantu, imindeni yabo kanye nemiphakathi abahlala e ngemfundo.
EdX unikeza interactive amakilasi inthanethi kanye MOOCs emanyuvesi wezwe best. Izifundo Online kusuka Mitxeu, HarvardX, BerkeleyX, UTx kanye namanye amayunivesithi amaningi.
A free futhi esezingeni lomhlaba imfundo for ubani kuphi. Singabantu inhlangano engenzi nzuzo kuhloswe yokuthuthukisa ifundo. Sinikeza free unqambothi nemfundo ubani kuphi emhlabeni.
Sithunywe ukuletha kufinyeleleke, okungabizi, sihehe, imfundo kanye ngempumelelo kakhulu ephakeme ukuze izwe. Sikholelwa ukuthi imfundo ephakeme ziyilungelo lomuntu eliyisisekelo, futhi sifuna ukuhlomisa abafundi kwethu ekuthuthukiseni imfundo yabo nemisebenzi.
UniMOOC kuyinto izifundo platform MOOC, lokhu kusho ukuthi izifundo zethu kukhona: Masivos, Online Vulekile (MOOC for isifinyezo yayo ngesiNgisi). Yilokho, okuyizinto free izifundo ubani angafinyelela kusuka kwikhompyutha internet. Ngokuqondile, izifundo zethu abe ingqondo ukuqeqeshwa for osomabhizinisi.
Imizamo Ngini Interesting
Stanford University - Multidisciplinary nakho project ezisekelwe kudala isimo esivumayo lapho afunda nabo bafunde sihlele imikhiqizo kanye namasevisi ngeke ukuguqula izimpilo zezakhamizi ampofu kakhulu emhlabeni. AbaFundi ukusebenza ngqo nabalingani izifundo izinkinga emhlabeni wangempela, umvuthwandaba okuyinto ukuqaliswa langempela futhi ushintsho lwangempela.
← Ukusheshisa Business and Business Network
Ifenisha House Italy